Vehivavy maka habaka iray nandritry ny fetibe Oruro tao Bôlivia · Global Voices teny Malagasy
Nanangana toerana hahitàna azy ireo ny vehivavy
Voadika ny 20 Mey 2020 5:45 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, русский, Français, Ελληνικά, Nederlands, Español
Vehivavy manao dihy nentindrazana avy any Andes manaraka ny rindra nataon-dry zareo manokana ho azy, machas caporales notariham-behivavy tao amin'ilay Fetibe Oruro 2020. Sary an'i Fabiola Gutierrez.
Jereo ny fandrakofana manokana ataon'ny Global Voices momba ny fomba fitoloman'ny vehivavy hanoherana ny herisetra noho ny maha-lahy na vavy any Amerika Latina.
Talohan'ny naneren'ny COVID-19 ireo firenena erantany hihiboka, nipoaka ho amin'ny hazavàna mamirapiratra ireo loko ary nitalakotrokotroka ny mozika tao amin'ilay Fetibe Oruro tao Bôlivia izay natao tamin'ny 17-26 Febroary tamin'ity taona ity.
Nandihy ireo mpitendry mozika, ary nihira ny mpandihy, samy nitafy akanjo nanjelanjelatry ny amboradara vita tànana izay namirapiratra noho ireo afo sy jiron'ny filatroana.
Any amin'ny 3.735 m (12,253 feet) miala amin'ny haavon'ny ranomasina, 35.000 ireo mpandihy ary 5.000 ireo mpitendry mozika no nankalaza ilay fety nentindrazana fivahinianana an-toerana masina natao teny amin'ireo làlana nirefy 4 km (2.48 mile) ho fanehoam-panompoana an'ilay Virgen del Socavón. Ny Fetibe Oruro, izay fanao isantaona any atsimo andrefan'i Bôlivia, dia nambaran'ny UNESCO ho Asa tonga lafatra amin'ny Lova am-Bava sy tsy azo tsapaina ho an'ny zanak'Olombelona.
Vehivavy mpikambana tao anatin'ilay tarika nandritra ny Fetibe Oruro 2020. Sary an'i Fabiola Gutierrez.
Na dia toerana natao ho an'ny fankalazàna aza ilay fetibe, asongadiny ihany koa ny tsy fitoviana misy eo amin'ny lahy sy ny vavy. Kanefa ireo vehivavy sy ireo olona tsy an'ny atsy na ny aroa, efa nahilikilika hatry ny ela tsy ho ao anatin'ilay fetibe, no ankehitriny mitaky habaka iray hahafahan'izy ireo misitraka ny zony ho afaka handray anjara.
Ao anatin'ny sehatry ny mozika, sambany tamin'ity taona ity no vehivavy iray no nitarika ny fetiben'ireo tarika mpiangaly ny nentindrazana — 18 taona taorian'ny nananganana voalohany ilay tarika. Vanina Miranda, tale, mpitendry pianô no sady soprano, niaraka tamina tale telo hafa, no nifantina sy nikarakara ary nitarika ny fiventesana ho an'ireo hira 23.
Mpiangaly ny “cymbale” niseho sehatra tao am-pidirana ho fanomezana voninahitra ny “Virgen del Socavón” tao Oruro. Sary an'i Fabiola Gutierrez.
Tsy ampy folo taona lasa izao, fony vao navela voalohany hiditra anaty tarika hiatrika ny Fetibe Oruro ny vehivavy, nisy saripika iray nivoaka teny anaty fampahalalambaovao niaraka tamina maribolana mpanavakavaka hoe: “Mitondra ‘loko’ iray hafa ho an'ireo tarika ireo vehivavy manja.” Nisy fiovàna niseho tamin'ny 2017 sy 2018, niaraka tamin'ny fahatogavan'ny Candelaria Female Instrumental Band , ary avy eo ny Santa Cecilia Band, noforonina vehivavy ary tsy nahitàna afa-tsy vehivavy tao anatiny.
Vehivavy maneho ny hatsaràna amin'ny fanehoana ara-kolontsaina ny Diablada amin'ny fampiasàna ny fihetsehana, ny mozika ary ny fitafy. Sary an'i Fabiola Gutierrez.
Eo amin'ny sehatry ny dihy, mihetsika ihany koa ry zareo vehivavy hanoherana ny fanjakazakan-dehilahy eo amin'ny fizaràna andraikitra mifanaraka amin'ny maha-lahy na vavy. Ohatra iray ny Diablada (Dihin'ny Devoly) izay fanehoana ny tolona ifanandrinan'ny tsara sy ny ratsy. Tany am-piandohana, navela fotsiny hahazo maneho ireo endrika misarintsarin-devoly ry zareo vehivavy, fa ankehitriny dia milalao mitàna ny toeran'ireo anjely vavy itarafana ireo Hatsaràna Fito sy manaraka ny Arkanjely Saint Michael.
Ry zareo Las Machas milalao endrika iray avy ao amin'ny dihy Caporal nentindrazana avy any Andes. Sary an'i Fabiola Gutierrez.
Ireo Machas, dika nomen'ny vehivavy ho an'ny Caporales, dihy nentindrazana any Andes, dia fanavaozana hafa vaovao. Satria ny teny espaniôla dia fiteny manavaka ara-gramatikaly ny lahy sy ny vavy, tsara marihana fa ny fampiasàna ny anarana hoe “Machas” (teny anondroana ny vehivavy, raha “Machos” ny lehilahy) fa tsy hoe “Las Caporales,” izay milaza fa raha te-ho ekena ny vehivavy iray dia tsy maintsy tondroina sy faritana ho toy ny lehilahy rehefa mampiseho toetoetra mifandraika amin'ny tanjaka sy hery. Fahabangàna iray hafahafa ny hoe zareo lehilahy tsy mikatsaka ny handika ny cholitas, endrika vehivavy iray ao anatin'ny dihy Caporales.
Nosokafan'ireo nanova taova ho vehivavy (trans) ny varavaran'ny fampiatiana amin'ilay fetibe
Hatramin'ny andiantaona 1970s, ny Virgen del Socavón no hany endrika vehivavy tokana tao anatin'ny Fetibe Oruro. Ny fitazonana ny nentindrazana manome vahana ny fahamboanian-dehilahy dia nanakana hatrany ireo vehivavy biôlôjika tsy ho afaka mandray anjara, araka izany io endrika vehivavy io dia ireo “trans”, ireo mitovy nefa mifanambady, ary ireo lehilahy manambady vehivavy, no maneho an-tsary io endrika vehivavy io, araka ny nohazavan'ilay mpikaroka sady tale ara-kolontsaina, David Aruquipa.
Ireo endrika vehivavy ao amin'ny dihy Morenada dia i China Morena (aseho misy na tsy misy arotava, ary indraindray aseho ho toy ny chola antitra manao zipo samihafa refy sy kiraro lava), ary ny Endrika Fantadaza, izay matetika no avahana amin'ny maha-lahy na vavy azy. Sary an'i Fabiola Gutierrez.
Ao anatin'ny dihy Morenada, manao fitafim-behivavy ry zareo lehilahy mba hanehoana ilay endrika nentindrazana “China Morena”. Tany amin'ny andiantaona 1960s sy 70s, nasiam-panovàna bebe kokoa ny endrik'i China Morena ary nisy ny fanomezana endrika sarimbavy azy: nafohezina ny zipony, nampiana voditongotra avobe ny kiraro lavany (baoty), ary nanomboka nandravaka ny fitafiany ireo amboradara tsy dia misy lanjany, namadika an'i China Morena ho lasa “China Morena Mariposa” (mariposa, na “lolo,” dia tenin-jatovo espaniôla anondroana ireo lehilahy pelaka), araka ny nanazavan'i Aruquipa azy .
Saingy tany afovoan'ny andiantaona 70s tany, noraràna tsy hahazo mandray anjara ireo vehivavy nanova taova, taorian'ny nanorohan'ilay vehivavy mpandihy, Barbarella, an'ilay lasa ho tena filoha tamin'izany fotoana Hugo Bánzer. Taorian'ilay tranga, nahazo alàlana hilatro ireo vehivavy biôlôjika.
Endrika Fantadaza amin'ny Morenada rehefa Fetibe Oruro. Avy amin'ny endrika China Morena Mariposa no niavian'izy ireto, araka ny namoronan'ireo nanova endrika / taova tany amin'ny andiantaona 70s. Sary an'i Fabiola Gutierrez.
Tany amin'ireo fetibe, nivoa fitafy ihany koa ny fanomezan-danja ny lehilahy
Na toy ny fomba iray hamoahana ny fanalalahana ara-pananahana aza no ijerena ireo fetibe, tsy maintsy atrehan'ireo vehivavy mandray anjara amin'izy ireny ireo andrana ataon'ny hafa mba hifehezana ny vatan'izy ireo. Ankehitriny, nahazo fanomezandàlana handihy sy hilalao mozika, tsy lasibatry ny filambaniny ara-nofo ihany koa ry zareo. Amin'ny ankapobeny izy io dia maka endrika fanehoankevitra manorisory toy ny hoe “Hetseho io, hetseho io!,” ny siotsioka, sy ny fitakiana hanaiky oroka. Ireo vehivavy tsy manaiky izany dia ampangaina ho “mankaloiloy.” Na ireo lehilahy mpandihy koa aza dia iharan'io fomba fitondra io, saingy maivamaivana kokoa sy tsy misy fanamelohana na ompa rehefa mandà. Kiakiahana ho “rafozambavy” ireo lehibe efa nahazo taona, satria ny fanavankavahana dia mbola mampietry foana ireo vehivavy ho vatana natao fotsiny ho an'ny filàna sy ny fitakian'ny maha-reny mpiteraka.
Ankoatra izay, amafisin'ny filambaniny ara-nofo ny fitsinjarazaràna ara-pananahana ny resaka fialamboly. Ivelan'ny toeran'ny mpanampy, ny ankohonana sy ny ao an-trano, aiza sisa no toerana avela ho an'ireo vehivavy Bôliviàna mba hialàny vonkina, tsy ho tratry ny horohoron'ny sotasota ara-nofo, ny fanolanana, na ny famonoana vehivavy? Misy ve ny toerana tahaka izany ho an'ireo vehivavy?
Chinas Supay (“devoly vavy”) tao amin'ny Fetibe Oruro 2020. Sary an'i Fabiola Gutierrez.
Vahaolana iray azo eritreretina ny avy amin'ny fomba fanao rehefa fetibe Comadres, fetibe bôliviana iray hafa ao an-tanànan'i Tarija any atsimon'i Bôlivia. Ankalazain'io fomba nentindrazana io ny finamànana misy eo amin'ireo vehivavy, amin'ny alàlan'ny fifanolorana harona feno sakafo, voninkazo, ary faneva. Ny Alakamisy alohan'ny Fetibe Oruro io fetibe iray io no atao, ary iantohan'ireo vehivavy ny tsy hisian'ny fitsabahan'ny lehilahy. Niparitaka tany amin'ireo tanàna hafa ao Bôlivia io fomba fanao io, fetibe manaraka tarakevitra mametraka trano fisotroana sy fanaovana fety, ary dia nandray izany hatramin'ilay hetsika feminista-baranahiny Mujeres Creando (“Vehivavy mamorona”), izay nanomboka ny Comadres Bandidas Party tamin'ity taona ity.
Isika miaraka no hanohy hikaroka fomba tsy hanekena ireo tsy refesimandidy ataon'ny lehilahy. Miaraka amina fahatsiarovantena feminista somary misimisy ihany, hiaraka hientana isika hanova ny zavamisy amin'ny maha-mpinamana sy pelaka. Araka ny nanmbaràn'ilay feminista Emma Goldman azy, sy toy ny namaritany ny Fetibe Oruro: “Raha tsy afaka handihy aho, tsy tiako akory ny ho isan'izay ao anatin'ny revôlisiôna ataonareo!”